OTU ESI EHICHAPỤ TWEET NIILE OZUGBO NA TWITTER - TWITTER - 2019
Laptọọpụ nke oge a, n'otu n'otu, na-ekpofu draịvụ CD / DVD, na-adịwanye njọ na ọkụ ọkụ. N'otu oge ahụ, ndị ọrụ nwere mkpa ọhụrụ - ikike iji wụnye OS site na windo mbanye. Otú ọ dị, ọbụlagodi na ngwa ngwa na-agba ọsọ, ọ bụghị ihe niile nwere ike ịga nke ọma dịka anyị ga-achọ. Ndị ọkachamara Microsoft enwere mmasị mgbe nile inye nsogbu dị egwu nye ndị ọrụ ha. Otu n'ime ha - BIOS nwere ike ọ gaghị ahụ onye ahụ ụgbọelu. Enwere ike idozi nsogbu ahụ site na ọtụtụ omume na-esochi, nke anyị na-akọwa ugbu a.
BIOS anaghị ahụ boot mbanye: esi edozi
N'ozuzu, ọ dịghị ihe dị mma iji wụnye os na kọmputa gị karịa kaadị USB flash gị. N'ime ya, ị ga-abụ 100% n'aka. N'ọnọdụ ụfọdụ, ọ na-apụta na mgbasa ozi n'onwe ya ka emere ya n'ụzọ na-ezighi ezi. Ya mere, anyị na-atụle ọtụtụ ụzọ iji mee ya maka nsụgharị kachasị ewu ewu nke Windows.
Na mgbakwunye, ịkwesịrị ịtọ ntọala ziri ezi na BIOS n'onwe ya. Mgbe ụfọdụ, ihe kpatara enweghị ike mbanye na ndepụta nke disk nwere ike ịbụ nke a. Ya mere, mgbe anyị jisiri ike na -emepụta ọkụ mbanye, anyị ga-atụle ụzọ atọ ọzọ iji hazie nsụgharị BIOS kachasị.
Nzọụkwụ 1. Kọmputa mpịakọta na onye ntinye nke Windows 7
N'okwu a, anyị ga-eji Windows USB / DVD Download Tool.
Buru ụzọ banye na Microsoft ma budata ọrụ ahụ iji mepụta ngwa ngwa na-agba ọsọ site n'ebe ahụ.
Wụnye ya wee malite ịmepụta draịvụ.
Iji bọtịnụ ahụ "Chọgharịa"nke ga-emeghe onye na-enyocha, dee ebe ebe ihe oyiyi ISO dị. Pịa na "Na-esote" ma gaa nzọụkwụ ọzọ.
Na windo na nhọrọ nke ụdị mgbasa ozi gbasaa "Ngwa USB".
Lelee ụzọ ziri ezi nke ụzọ mgbaba na-amalite ihe e kere eke site na ịpị "Malite na-edegharị".
Ọzọ ga-amalite, n'ezie, usoro nke ịmepụta ụgbọala.
Mechie windo ahụ na-emebu wee gaa n'ihu ịwụnye usoro sitere na mgbasa ozi ọhụrụ ahụ.
Gbalịa iji windo na-agagharị.
Usoro a bara uru maka Windows 7 na okenye. Iji dekọọ ihe oyiyi nke usoro ndị ọzọ, jiri ntuziaka anyị maka ịmepụta draịva flash.
Na ntụziaka ndị a, ị nwere ike ịhụ ụzọ ịmepụta otu mgbaaka ahụ, mana ọ bụghị Windows, kama yana usoro sistemụ ndị ọzọ.
Ihe omumu: Otu esi emepụta ngwa USB flash na DOS
Ihe omumu: Otu esi emepụta ngwa USB USB nwere ike isi na Mac os
Usoro 2: Dezie BIOS Award
Iji tinye BIOS Award, pịa F8 mgbe usoro sistemụ na-ebudata. Nke a bụ nhọrọ kachasị. Enwekwara njikọ ọnụ na-esonụ:
Ctrl Alt Esc;
Ctrl + Alt Del;
Tọgharia (maka kọmputa Dell);
Ctrl Alt F11;
Ugbu a, ka anyị kwuo banyere otu esi edozi BIOS. N'ọtụtụ ọnọdụ, nke a bụ nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ị nwere BIOS Award, mee nke a:
Site nchịkọta nhọrọ, gaa na mpaghara eji akụ na keyboard. "Ndị Elu Ụlọ Elu".
Lelee na ịgbanwere eriri USB nke ndị nchịkwa na-edozi "Kwadoro", ọ bụrụ na ọ dị mkpa, gbanwee onwe gị.
Gaa na ngalaba "Di elu" site na isi akwukwọ wee chọta ihe "Nsogbu mkpọchi siri ike". Ọ na-ese dịka e gosiri na foto dị n'okpuru. Na-agba ume "+" na keyboard, gaa n'elu "USB-HDD".
N'ihi ya, ihe niile kwesịrị ịdị ka nke e gosipụtara na foto dị n'okpuru.
Gbanwee na windo mpaghara mpaghara ọzọ. "Di elu" ma mee ka mgbanwe ahụ dị "Ngwa Mbụ Mbụ" na "USB-HDD".
Gaa na window nke ntọala BIOS gị wee pịa "F10". Kwenye nhọrọ gị "Y" na keyboard.
Ugbu a, mgbe ịchisịrị, kọmputa gị ga-amalite nkwụnye site na USB flash drive.
Lee kwa: Na-eduzi ikpe mgbe kọmputa ahụghị flash mbanye
Nzọụkwụ 3: Hazie AMI BIOS
Igodo ụzọ mkpirisi maka ịbanye AMI BIOS bụ otu maka BIOS Award.
Ọ bụrụ na ịnwe BIOS AMI, gbasoo ụzọ ndị a dị mfe:
Gaa na BIOS ma chọta mpaghara "Di elu".
Gbanwee ya. Họrọ ngalaba "Nhazi USB".
Tọọ ntọala "Ọrụ USB" ma "Njikwa USB 2.0" na ọnọdụ "Kwadoro" ("Kwadoro").
Pịa taabụ "Download" ("Bọọ") ma họrọ ngalaba "Dọks Diski Ike".
Bugharịa ebe "Nchekwa Patriot" na ebe ("1st Drive").
Ihe nke omume gị na mpaghara a kwesịrị ịdị ka nke a.
Na ngalaba "Bọọ" gaa "Boot Device Priority" ma lelee - "1st Boot Ngwaọrụ" ga-adaba adaba na nsonaazụ nwetara na nzọụkwụ gara aga.
Ọ bụrụ na emezuru ihe niile n'ụzọ ziri ezi, gaa na tab "Ọpụpụ". Pịa "F10" na windo na-egosi - isi ntinye.
Kọmputa ahụ ga-abanyeghachi ma malite usoro ọhụrụ na-amalite site na windo flash gị.
Lee kwa: Esi weghachite ngwa-ikpo ọkụ mbanye A-Data
Usoro 4: Hazi UEFI
Ịbanye na UEFI bụ otu ihe ahụ na BIOS.
Nke a dị elu nke BIOS nwere eserese eserese na ị nwere ike ịrụ ọrụ na ya na òké. Iji mee ka ọ bụrụ na ị ga-esi na mgbasa ozi ndị nwere ike iwepụ, gbasoo usoro usoro dị mfe, na kpọmkwem:
Na windo ahụ, họrọ ozugbo "Ntọala".
Na mpaghara a họọrọ site na òké ahụ, setịpụ oke "Nhọrọ nhazi # 1" nke mere na ọ na-egosi flash drive.
Bipute, reboot na wụnye OS ịchọrọ.
Ugbu a, iji ngwá agha na-agbagha nke ọma na ihe ọmụma nke ntọala BIOS, ị nwere ike izere nchegbu na-enweghị isi mgbe ị na-arụ ọrụ sistemụ arụmọrụ ọhụrụ.
Lee kwa: 6 nwara ma nwalee ụzọ iji weghachi Transcend flash drive